गुफामा लुकाएको पाँच करोड ब्यारेल तेल झिक्न बाइडेनको आदेश, के हो अमेरिकी तेल गुफा ? - Nagarik Today
होम » गुफामा लुकाएको पाँच करोड ब्यारेल तेल झिक्न बाइडेनको आदेश, के हो अमेरिकी तेल गुफा ?
गुफामा लुकाएको पाँच करोड ब्यारेल तेल झिक्न बाइडेनको आदेश, के हो अमेरिकी तेल गुफा ?
विश्वभर तेलको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले देशको रणनीतिक तेल भण्डारबाट पाँच करोड ब्यारेल कच्चा तेल निकाल्न आदेश दिएका छन् । तरल इन्धन अत्यधिक खपत गर्ने चीन, भारत, बेलायत, जापान र दक्षिण कोरियालगायत मुलुकसँग छलफल गरी बाइडेनले विशाल नुनिलो गुफामा अमेरिकाले लुकाइरहेकोमध्ये उल्लेखित परिमाणमा तेल निकाल्न मंगलबार आदेश दिएका हुन् ।
यतिखेर तेलको मूल्य विश्वभर बढिरहेको छ । अमेरिकी बजारमै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७८.६५ अमेरिकी डलर पुगेको छ । आयातमा निर्भर र इन्धन आपूर्तिमा ठूलो रकम खर्च गर्ने मुलुकहरूमा व्यापार घाटा चुलिइरहेको छ । निर्यातक मुलुकहरूले नै तेलको मूल्य बढाउन साँठगाँठ गरेको आरोप छ । आगामी डिसेम्बर १५ भित्र पाँच करोड ब्यारेल तेल निकालेर तरल इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिने अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइटहाउसले जानकारी दिएको छ । सन् १९७३ मा अरब–इजरायल युद्ध (सिक्स डेज वार) हुँदा अमेरिकाले इजरायललाई सघाएको थियो ।
त्यसैको प्रतिशोधस्वरूप खाडी मुलुकहरू इराक, कुवेत, कतार र साउदी अरबले अमेरिकामा तेल निर्यात बन्द गरेका थिए । त्यतिखेर अमेरिकामा प्रतिब्यारेल तीन डलर रहेको तेलको मूल्य चार गुणा बढेर १२ डलर प्रतिब्यारेल पुगेको थियो । विशाल नुनिला गुफामा तेल भण्डारण गर्न अमेरिकी संसदले ऊर्जा नीति र संरक्षण कानून नै जारी गरेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा केन्द्र (आईईसी) ले पनि सदस्य राष्ट्रहरूलाई ९० दिनसम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न अनुमति दिएको थियो ।
इनर्जी इन्फर्मेशन एडमिनिष्ट्रेशन यूएसएका अनुसार सन् १९९१ मा भएको खाडी युद्धका बेला तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज एच डब्ल्यू बुसले सो भण्डारको तेल प्रयोग गर्न आदेश दिएका थिए । बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति रहेका बेला सन् १९९७ मा पनि दुई करोड ८० लाख ब्यारेल तेल खपत गरिएको थियो । सन् २०११ मा अरब मुलुकहरूमा फैलिएको आन्दोलन र गृहयुद्धका बेला पनि सो रिजर्भको तेल प्रयोग गरिएको थियो । सन् २०१७ मा ट्रम्प प्रशासनले पनि संघीय घाटा पूर्ति गर्न सो गुफाको आधा तेल बेच्नेबारे छलफल गरेको थियो ।
Biden oil industry